တခါတရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်သို့နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာအတွက် surprise ည့်သည်များလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့မိသားစုအတွက်မှန်ကန်သောအစားအစာများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့သင် ...
သင်ကြက်သား (ကင်၊ ချက်ထား၊ ဖုတ်သည်ဖြစ်စေ) သင်သည်အဘယ်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်စဉ်းစားဖူးသည်မှာသေချာသည်။
ငါရိုးရှင်းတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများကိုချစ်; လက်လှမ်းမှီသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလုပ်သောနှင့်မျိုးပွားရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းသူများသည်။ ဝိုင်နဲ့ဝက်အူချောင်းတွေအတွက်ဒီနည်းက ...
ဝက်အူချောင်းများကိုများသောအားဖြင့်အိမ်တွင်ချက်ပြုတ်လေ့မရှိပါ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကစားတွေအများကြီးပေး; ငါတို့ကသူတို့ကိုကြော်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ပါ။
ဒီနေ့ဟာရိုးရှင်းပြီးအကျွမ်းတဝင်စာရွက်တစ်ခုပါ။ ကလေးတွေကအဲဒါကိုသဘောကျမယ်၊ လူတိုင်းနီးပါးဝက်အူချောင်းနှင့် mashed ကြိုက်တယ် ...
ဒီချက်ပြုတ်နည်းဟာအစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စတင်သူအတွက်အကောင်းဆုံးဟင်းပွဲဖြစ်ပြီးငံပြာရည်နှင့်အဆင့်နှစ်ဆင့်မျှသာရှိသော ... \_ t
ဒီနေ့မှာတော့သင့်အားပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာလိုအပ်။ ပရိုတင်းဓာတ်များစွာကြွယ်ဝသောစာရွက်ကိုသင့်အားယနေ့ယူဆောင်လာသည်။ ဒါဟာကြက်သွန်နီနဲ့အရည်ရွှမ်းတဲ့ကြက်သားဝက်အူချောင်းတွေပါ။
puff pastry မိုးကာအင်္ကျီအတွက်ဝက်အူချောင်း
ကြက်သွန်နီငံပြာရည်၊ အသုပ်ကြွယ်ဝသောဟင်းလျာများ၊ ဝက်အူချောင်းတွေဟာနာမည်ကောင်းမရပေမယ့် ...
၀ က်ခြံများနှင့်ပတ်သက်သောဒဏ္myာရီများစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လူကြီးများနှင့်လူကြီးများကိုပါ ၀ င်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အားတားဆီးပေးသည်မဟုတ်ပါ။
ဝက်အူချောင်းများသည်ကလေးများအတွက်အလွန်ကြွယ်ဝ။ အလွန်တန်ဖိုးထားသည့်အစားအစာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုပြုလုပ်ရာတွင်မတူညီသောထိတွေ့မှုဖြင့်ပြုလုပ်ပါက ...
ငါမင်းကိုမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဆော်လမွန်ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့ငါးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။ ငါများသောအားဖြင့်ကင်ပေါ်မှာချက်ပြုတ်ပြီးအစေခံ ...
ဆယ်လ်မွန်ဓာတ်သည်ပရိုတင်းဓာတ်များများပြားခြင်းနှင့်ကိုလက်စထရောလ်ဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးသောအိုမီဂါ -၃ ဖက်တီးအက်စစ်များကြောင့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအစားအစာဖြစ်သည်။
ဆော်လမွန်ငါးသည်အဆီနှင့်သက်ဆိုင်သောအထူးခြားဆုံးအချက်မှာ၎င်း၏အဆီအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အိုမီဂါ -၃ polyunsaturated fatty acids တည်ရှိမှုနှင့်အတူ ...
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းငယ်စွန့်ပစ်ထားသောငါးများ ဖြစ်၍ ယနေ့အရသာရှိသောငါးကိုအခြေခံသောထမင်းဟင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့ကြမည်။
အိမ်မှာရောစပ်ထားတဲ့ဟင်းလျာများကိုကြိုက်တယ် ကျနော်တို့မကြာခဏတညစာအဘို့တပြင်ဆင်ထား, ထိုအခါသမယအတွက်ငါတို့ပြင်ဆင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်အခြားသူများနှင့်အတူပေါင်းစပ် ...
ပဲ pesto နှင့်အတူကင်ဆော်လမွန်
ဆော်လမွန်စားနေတယ်။ ငါများသောအားဖြင့်၎င်းတွင်ပါရှိသောစာရွက်တိုင်းကိုကြိုးစားလေ့ရှိပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ငါတို့ပြင်ဆင်သောကင်ဆော်လမွန်သည် ...
သင်ဆဲမသိသေးပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါကဤဆော်လမွန်သည်အဘယ်ကြောင့်ရိုးရိုးလေး၊
avocado နှင့် Cherrys တစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူဆော်လမွန်
သင်ဆဲမသိသေးပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်ဆက်ဖတ်ပါကဤဆော်လမွန်ကားကိုဘာကြောင့် avocado နှင့် cherrys dressing နှင့်ရိုးရှင်းပြီးလန်းဆန်းစေသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
chive နှင့် walnut တစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူဆော်လမွန်
Cooking Recipes ကိုလိုက်နာသူများသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆော်လမွန်အဘယ်အရာကိုကြိုက်သည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်လလျှင် 3-4 ကြိမ်ချက်ပြုတ်လေ့ရှိပြီးအမြဲတမ်းရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည် ...
ငံပြာရည်အတွက်ကညွတ်နှင့်အတူဆော်လမွန်။ အရသာရှိတဲ့ငါးတစ်ကောင်ပေါ့။ သင်သိသည့်အတိုင်းဆော်လမွန်ငါးသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အလွန်ကျန်းမာ၊ ကြွယ်ဝသည်။
ပုစွန်, gulas နှင့်မုန့်နှင့်အတူမုန်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: gulas 1 packet ကို 500 ml ကိုမုန့်4ဆပ် salmon ချပ်ပုစွန် 1/4 ကီလိုဂရမ်ကြက်သွန်ဖြူ2လေးညှင်းပွင့ 1/2 ကြက်သွန်အဘိတ်: Dora ...
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောဟင်းချက်ခြင်းသည်အိမ်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်။ သင်တစ် ဦး အစားအစာအပေါ်သင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သွားကြောင်းသူကပြောသည်? ...
Cooking Recipes မှာသီတင်းပတ်ကုန်ဆုံးပြီးပင်လယ်ဟာဇတ်ကောင်ဖြစ်သည့်ချိုမြိန်ငံပြာရည်နှင့်ဆော်လမွန်ဖြစ်သည် A ...
ကင်ဆော်လမွန်စားတာကိုငြီးငွေ့နေသလား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆော်လမွန်စားရန်ကွဲပြားသောအလွန်လွယ်ကူသောစာရွက်ကိုဆောင်ယူလာပါပြီ။ ငံပြာရည်နဲ့ဆော်လမွန်အကြောင်းပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ:2leeks Parsley လူတစ် ဦး အတွက်ဆော်လမွန်အချပ်3ထင်းရှူးအခွံမာသီး၏ဇွန်း 1 နို့တစ်ခွက် Nutmeg ဖြူငရုတ်ကောင်းအဘိတ်: အဖြူအစိတ်အပိုင်းSauté ...
ဒီကနေ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ဆော်လမွန်ငါးတစ်ကောင်၊ မီးဖို၌ပြင်ဆင်ထားသောဆော်လမွန်ငါးအတွက်အလွန်ရိုးရှင်း။ ကျန်းမာသည့်ဆေးတစ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်အဆိုပြုထားသည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ...
အိမ်မှာဆော်လမွန်ကိုချစ်ကြတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါတစ်ခါစားလေ့ရှိတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့မီးဖိုပေါ်ချက်ပြုတ်သည်။
ပဲပိစပ်မှဆော်လမွန်ငါးကိုကျန်းမာအောင်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေသည့် Cooking Recipes တွင်တစ်ပတ်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကြောင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုတင်ပြချက်နှင့်အတူစာရွက် ...
Salmorejo ဟာ Andalusian ဟင်းလျာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်Córdobaဒေသကခရမ်းချဉ်သီး၊ ပေါင်မုန့်၊ ဆီ၊
နွေရာသီအတွက်အငြင်းပွားစရာမရှိသောပန်းကန်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်ပင်လယ်စာသုပ်ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဒီအံ့ and စရာကောင်း။ ပင်လယ်ရေကြောင်းပြdishနာကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး ...
Octopus salpicónသည်အရသာရှိပြီးလတ်ဆတ်သောစတင်စားသုံးသည်။ ငါတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သောဟင်းလျာတစ်ခု အခြေခံ…
Sour Sauce - ကြက်သားနှင့်တူရကီအတွက်ချိုသည်
ငံပြာရည်ဘူးတွေဟာငါတို့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာနေရာသိပ်မယူပါဘူး။ အိမ်မှာဟင်းပွဲတွေနဲ့အတူအိမ်မှာပြင်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ကလွဲရင် ...
ဒိန်ချဉ်အခြေစိုက် White Sauce
ယနေ့ငါအဖြူငံပြာရည်အတုဟုခေါ်ခြင်းနှင့်ခေါက်ဆွဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်, ချက်ချင်းချက်ပြုတ်သည်မဟုတ်, ချက်ပြုတ်တင်ပြ ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါက်ဆွဲနှင့်အတူလိုက်ပါရန်၊ စည်သွပ်မိုး၊ ပီဇာစသည်တို့အတွက် Bolognese ငံပြာရည်ကိုပြင်ဆင်မည်။ ဤစာရွက်သည်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုပြသရန်ဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: 250 grs ။ အစိမ်းရောင်ကြက်သွန် 250 grs ၏။ နို့မုန့်သံလွင်ဆီ၏ဝိုင်ဖြူဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ကို ... \_ t
ယနေ့ငါအရသာရှိတဲ့ကင်အသားနှင့်အတူလိုက်ပါရန်, သင်ပုံမှန်အာဂျင်တီးနားစာရွက်ကိုတင်ပြ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ: - ဆီ 100 cc ဆီ - ကြက်သွန်နီ 1 ...
Basil သို့မဟုတ် pesto ငံပြာရည်
အာလူး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါးများနှင့်အမဲသားများပါ ၀ င်သည့်အရသာများစွာရှိပြီးအလွန်မွှေးကြိုင်သောဆံပင်၊ ဘေစလီသို့မဟုတ်ပီဆိုစုတ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့အရာဟာကျွန်တော့်ရဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်သူအောင်မြင်ခဲ့တာကိုမြင်ပြီးနောက်မှာတော့ ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ထောပတ် ၅၀ ဂရမ် (ကြော်ရန်) မုန့်အိုးအစိမ်းရောင်ကြက်သွန်အဘိတ်: ကြက်သွန်ကိုဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီးကြက်သွန်အစိမ်းကိုခုတ်ပါ။
ခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ်အသားဟင်းလျာများနှင့်အတူ walnut ဆော့စ်
အဘယ်ကြောင့်ငါ walnut ငံပြာရည်စောစောစီးစီးရှာဖွေတွေ့ရှိပြီမဟုတ်လော "sarsa de noxe" သို့မဟုတ် "sugo di noci" ဟုလူသိများသောဤငံပြာရည်သည်ပူးတွဲပါ ၀ င်သည်။
ငါမကြာသေးမီကဝက်အူချောင်းများကကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်၊ သို့သော်ထိုသို့မတိုင်မီ ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ:4leeks 1 မုန်လာဥ 30 ဂရမ်။ ထောပတ် 50 cc ဝိုင်ဖြူဖြူ၏ cc ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း 150 cc အဘိတ်။
အန်ချိုနီနှင့်အတူ Roquefort ငံပြာရည်
Roquefort ဒိန်ခဲ (သို့) အပြာရောင်ဒိန်ခဲသည်မတူညီသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုအရသာမြိန်မြူးစေရန်အတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဤထုတ်ကုန်နှင့်အချိုဓာတ်အချို့ပါဝင်သောလက်ရာမြောက်သောငံပြာရည်ကိုပြင်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။
အသုပ်များအတွက် Roquefort ငံပြာရည်
သင်ဟာအသုပ်တွေကြိုက်နှစ်သက်သူ၊ ကောင်းပြီ၊ ဒီအရသာဆော့စ်ကြောင့်ဒီအဆုံးသတ်သွားတယ် ...
ကြက်သွန်ဖြူနှင့် parsley နှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်
ခရမ်းချဉ်သီးကိုကြက်သွန်ဖြူနဲ့ parsley တို့နဲ့ရောဖူးသလားဒီအရသာရှိတဲ့ငံပြာရည်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အစကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ - မှည့်သောခရမ်းချဉ်သီး ၁/၂ ကီလိုဂရမ် ၂ ...
အိမ်တွင်အိမ်လုပ်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်၎င်းသည်အမှန်ပင်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအိမ်လုပ်ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ အဖွား၏ချက်ပြုတ်နည်းများကိုရောင်းသည်။ သို့သော် ...
သင်၏မိသားစုကိုအခြားငံပြာရည်ဖြင့်အံ့အားသင့်စေလိုပါကဤရွေးချယ်စရာကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ - သံလွင်ဆီဇွန်း ၃ ဇွန်းနှင့်အခြား ...
ဝက်အူချောင်းများသည်အသားများကိုအခြားအမျိုးအစားသို့မြှင့်နိုင်သည်။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲပိစပ်နဲ့ပျားရည်ဆော့စ်ဟာဥပမာတစ်ခုပါ။
တစ်ခါတစ်ရံဟင်းလျာများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အတူလိုက်ပါရန်အတွက်တူညီသော mayonnaise ငံပြာရည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါ ...
မင်းရဲ့ခေါက်ဆွဲအရသာကိုပြောင်းလဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများရွှေဖရုံသီး 1/2 ကီလိုဂရမ် 1 ကြက်သွန် 1 မုန်လာဥ 1 ကြက်သွန်ဖြူ2ဇွန်း ...
ယနေ့ငါငါးနှင့်အသားပြုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်စံပြပြင်ဆင်မှုဖြစ်, လက်ရာမြောက်သော hollandaise ငံပြာရည်အောင်အခြေခံစာရွက်ကိုတင်ပြ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ:3အနှစ် ...
Hollandaise ငံပြာရည်သည်ထောပတ်ကြက်ဥအနှစ်၏သုတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ဤနာမည်ရှိသော်လည်းပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။
ဤတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်စံပြငံပြာရည်များအတွက်စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ကြက်သွန်ဖြူ2လေးညှင်းပွင့်3ကြက်သွန်နီ 60 ဂရမ်။ ထောပတ် 1/4 လီတာထောပတ် ...
၀ က်သားပါ ၀ င်သောမီးဖို၌သော်လည်းကောင်း၊ ကင်တွင်လည်းကောင်းချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာပန်းကန်ကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သောအခါ ...
crudités, starter သို့မဟုတ်ရိုးရာပြင်သစ် appetizer များအတွက်ငံပြာရည်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကိုကုန်ကြမ်းများစားလျှင်၎င်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ အစာမစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏အာဟာရဓာတ်များအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းပေးလိမ့်မည်။ ပြင်သစ်မှာ ...
ခေါက်ဆွဲ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အလွန်ကျန်းမာသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံအထူးသဖြင့်ဟင်းရည်ကဲ့သို့သောဆေးထည့်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ဒိန်ချဉ်6ဇွန်းသေးငယ်တဲ့ mayonnaise ငရုတ်ကောင်းဆားအပေါ်ပြီးလျှင်စမုန်နက်2ဇွန်း 1 အဘိတ်အဘိတ်, ပန်းကန်လုံးထဲသို့ mayonnaise ထား add ...
အိမ်လုပ် tartar ငံပြာရည်
အိမ်မှာငါတို့ဟာကျောက်ချဉ်ချဉ်ရည်ကိုအလွန်နှစ်သက်ကြပြီး၊ ဒါဟာဝက်ပေါင်ခြောက်သားညှပ်ပေါင်မုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောပူးတှဲပါ ...
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများကို (napar) ရေချိုးရန် bechamel ဆော့စ်ကိုအမြဲသုံးလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ...
နွေရာသီမှာဟင်းချက်ရတာအရမ်းလွယ်တယ် ... အသုပ်နဲ့အကြော်တွေကြားမှာအိမ်မှာငါတို့စားတဲ့ ၈၀% ကိုပြီးအောင်လုပ်တယ်။ ဒီ zucchini နဲ့ကြက်သားကိုရောမွှေပြီး ...
Zucchini နှင့်အတူSautéed Zucchini၊
Zucchini သည်အထူးအရသာရှိသောအလွန်ပြီးပြည့်စုံသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး၎င်းကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်အလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ ဒီနေ့ ...
ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အစာအာဟာရသည်လူတိုင်း၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သဖြင့်အဟာရပြည့်ဝရန်လိုအပ်သည်။
ယနေ့ငါချက်ပြုတ်နည်းချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်အလွန်လွယ်ကူသောစာရွက် - sautéedမှိုနှင့်ငရုတ်ကောင်းအနုပညာအဆိုပြုထား။ ၎င်းသည်အစပြုရန်အစပြုနိုင်သည့်အဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အချိုမှုန့်များသည်များသောအားဖြင့်များစွာသောပေါင်းစပ်ပါဝင်သောပေါင်းစပ်မှုအားပျော်မွေ့ရန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောအကြော်တစ်ခုမှာ ...
သင်၏နေ့စဉ်အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းရန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုသင်ရှာနေလျှင်၎င်းသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ပဲအစိမ်းနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတို့က ...
15 မိနစ်ညစာ, ဘေကွန်နှင့်နံ့သာမျိုးနှင့်အာလူးကြော်
ဒီနေ့မှာသင့်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အလျင်အမြန်ချက်ပြုတ်ဖို့ချက်ပြုတ်နေပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄ င်းမှာပါဝင်ပစ္စည်းများမပါဝင်သည့်အပြင်၊ အကြောင်းပါ။
ဒီအကျပ်အတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်မရှူဖို့ငြင်းဆန်နေပုံရပြီးအခုအချိန်မှာကျော်ကြားလှတဲ့ဇန်န ၀ ါရီလကိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကျော်တက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲ ...
ကြက်သားနှင့် romanesco မြေပဲနှင့်အတူကြော်နှိုးဆော်
ဒီနှစ်အစမှာ La Huerta ကမီးဖိုချောင်တွင်အားသာချက်များကိုယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Romanescos အချို့ကိုပေးခဲ့သည်။ အပြင် ...
ငါရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အနည်းငယ် tools များနှင့်အတူလုပ်ဤကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုချစ်။ မီးဖိုချောင်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်သော်လည်းနေ့ရက်များရှိသည်။
ကမ္ဘာမြေမှပေးသောအသီးများ၊ မှိုများ၊ သစ်အယ်သီးစသည်တို့ကိုရရှိရန်ငါထွက်သွားသည့်အချိန်တွင်ဆောင်း ဦး ရာသီနီးပြီ။ ဒီနေ့ငါသွားမယ် ...
သငျသညျရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ငါတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါတို့ပြသသောအခြားပိုမိုပီပီချက်ပြုတ်နည်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကိုသိရကြိုက်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီမှာကွဲပြားခြားနားသောဟင်းလျာများ ...
သင်သိသည့်အတိုင်းစျေးကွက်တွင်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သော်လည်းယခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးအေးခဲနေသောကုန်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုတွင် ပို၍
ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ San Jacobos
ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ San jacobos, သင်အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အမြန်စာရွက်။ ဤသည် San Jacobos အများအပြား ...
marin ခါး, ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ San jacobos
San jacobos de tapines၊ ကလေးငယ်များအတွက်အထူးညစာစား
Tapines ဟာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ သူတို့မှာရေအများကြီးနဲ့ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်လာသည် ...
အလွန်ကောင်းသည်! ဘယ်သူ့ကိုမှဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ တစ်နေ့လုံးအိမ်ကနေထွက်သွားပြီးအလုပ်အတွက်ပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ...
လှသောအဆင်း! သူငယ်ချင်းများအိမ်တွင်စားပွဲတစ်ဝိုက်တွင်အတွေ့အကြုံများနှင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်ကာလများကိုမျှဝေခြင်း၏အံ့ဖွယ်တစ်ခုမှာသင်အမြဲ (အမြဲတမ်း) သင်နှင့်အတူယူဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Croque-monsieur သည်ပုံမှန်ပြင်သစ်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် au gratin ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မည်သည့်ပုံမှန်သားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်မဆိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။
မုန့်ဖုတ် croque- Monsieur သားညှပ်ပေါင်မု
Croque-monsieur သည်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ ချက်ထားသောဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲများသောအားဖြင့် Emmental သို့မဟုတ်Gruyère, gratin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ဖြစ်သည်။ အထဲမှာရှိတဲ့ဘုံသားညှပ်ပေါင်မု ...
စနေ၊ တနင်္ဂနွေလာပါ၊ ညစာစားရန်အမြန်ပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းတစ်နည်းမှာ sadwiches များလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ဖွင့်ရမှာပဲ
တူနာငါးနှင့် mayonnaise အသုပ်သားညှပ်ပေါင်မု၊
ချက်ပြုတ်တာထက်အထီးကျန်ညစာအတွက်အရသာရှိတဲ့အရသာရှိတဲ့အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေထက်ရိုးရှင်းတာဘာမှမရှိဘူး။ ၎င်းတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဖြစ်နိုင်သောအစားအစာများပါ ၀ င်နိုင်သည်။
အိမ်ပြန်လာရင်ပင်ပန်းနေပြီးချက်ပြုတ်တာမျိုးမခံစားရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ကရေခဲသေတ္တာဒါမှမဟုတ်သိုလှောင်ရုံကိုဖွင့်ပြီးပြောတာက ...
ပြင်သစ် omelette နှင့်ပန်းသီးသားညှပ်ပေါင်မု
သောကြာနေ့ညရောက်ပြီ၊ ငါတို့ချက်ပြုတ်တာမျိုးမခံစားရဘူး အသားညှပ်ပေါင်ထို့နောက်ကောင်းတစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လာ; ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်ပြီးဘယ်လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေညစာစားပွဲများသည်အိမ်တွင်အလွတ်သဘောဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သူငယ်ချင်းများကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ။ အရည်ရွှမ်းသောအသားညှပ်ပေါင်မုန့်အချို့ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ၊
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ! သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အိမ်တွင်အလွတ်သဘောကတိကဝတ်ရှိသည်ဟုသင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးပါသလား၊ ရိုးရှင်းသော၊ အလွတ်သဘောပန်းကန်ပြုလုပ်နည်းကိုသင်မသိပါ။
'အသားညှပ်ပေါင်မုန့်' ၏မူလအစသည် ၁၈ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်ဟုသင်သိပါသလား။ သို့သော် ၁၉၂၇ ခုနှစ်ရောက်မှအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဆိုသောစကားလုံးသည် ...
Sanfaina, ကြွယ်ဝသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ပန်းကန်။ Manchego ပစ္စတိုနှင့်အလွန်ဆင်တူသော Catalonia ဟင်းပွဲတစ်မျိုး။ တစ် ဦး ချင်းစီအိမ်သူအိမ်သား၎င်း၏စာရွက်ရှိပါတယ်ပေမယ့်။ ပန်းကန်တစ်ခု ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကအရမ်းကျန်းမာတယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ချက်ပြုတ်နည်းအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။ သုပ်တွေလိုအအေးခန်းထဲမှာရော၊
ဤတနင်္ဂနွေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူအသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါသောဆလတ်ဤအိတ်များလည်းရှိသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့တင်ပြချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ showy ဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုမဖြုန်းတီးဘဲ၊ အဝတ်အထည် (နှင့်အခြားအရာအားလုံး) ကို ဦး ထုပ်အဖြစ်မထည့်ဘဲဤအားလပ်ရက်များသည်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့်မည်သို့တူမည်နည်း။ ဒီခရစ်စမတ်…
ငါရေခဲသေတ္တာထဲမှာသက်တမ်းကုန်တော့မယ့်ဆိတ်ဒိန်ခဲဆောင်လည်ဆွဲကလေးအချို့ ... သင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလွှင့်မပစ်သင့်ဘူး၊
ဤလ၏ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် guests ည့်သည်များကိုအံ့အားသင့်စေမည့် menu တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ သင်အဆိုပြုလွှာ ...
ကြက်ကြော်များသည်နွေရာသီတွင်ရိုးရာဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့်တောင်ပိုင်းဒေသများ၌ ...
မုန်ညင်း tenderloin သားညှပ်ပေါင်မု
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ညစာအတွက်ပီဇာ၊ ညစာနောက်တစ်ခုကျရင်သောကြာနေ့များသောအားဖြင့် ...
ခရမ်းချဉ်သီး mortadella သားညှပ်ပေါင်မု
နေ့လည်ခင်းအတော်များများအားလပ်ရက်မှာအားလပ်ရက်တွေဒါမှမဟုတ်အချိန်သိပ်မရှိရင်၊ ငါတို့ဟာများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ လတ်ဆတ်ပြီးအမြန်အစားအစာများနှင့်များသောအားဖြင့်တွေ့ဆုံလျှင် ...
ငါတို့ဟာထောပတ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုပြင်ဆင်ကြမယ်။ ဤကိုက်များသည်ညစာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ချက်ခြင်းပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူတို့ကအတူပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်
Scones များသည်နံနက်စာနှင့်သရေစာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစကော့တလန်ချိုသောအလိပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးနှစ်ခြိုက်စရာကောင်းသည့်ဘေးထွက်ဟင်းပွဲများကို ၀ န်ခံသည်။
သစ်ကြံပိုးချောကလက် Chip Scones
ငါမုန့်ကိုကမ္ဘာသို့ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းစတင်သောအခါငါ scones ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထိုအချိန်မှစ။ ငါပြင်ဆင်နေဘူး။ ဤရွေ့ကား ...
Scones ငါအားနည်းချက်ဖြစ်တယ်, ငါကဝန်ခံသည်။ ဒီကပ်ရောဂါကငါတို့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်၊ ငါတပတ်တခါသွားခဲ့ဖူးတယ်။
ပန်းသီး ratatouille နှင့်အတူဘီယာမှဝက်သားလျှို့ဝှက်ချက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အလွန်အရသာရှိသောအစာစားခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် #slowcooking စတိုင် (ဖြည်းဖြည်းချက်ပြုတ်ပါ၊ ပျော်မွေ့ပြီးအရသာမြိန်စွာချက်ပြုတ်ခြင်း) ဖြင့်အသစ်သောဝန်ကိုပြန်ယူပါလိမ့်မည်။
Stoplight, ကျပ် marinated tenderloin
Semifrío or semifreddo ကိုအီတလီမှာသိထားတဲ့အတိုင်းအေးခဲတဲ့အေးခဲတဲ့အချိုပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဘယ်သူ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ယခုနှစ်ဒီအချိန်များအတွက်စံပြအချိုပွဲ ...
နက်နဲလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုသိပ်မရှိသောဟင်းတစ်ခွက်ကိုယနေ့ငါယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ ဒါဟာပေါ့ပါးတဲ့ပန်းကန်ဖြစ်ပြီး ...
ပူငံပြာရည်အတွက်ထак။ ပေါင်မုန့်နှစ်ငံပြာရည်နှင့်အတူတစ်အရသာပန်းကန်။ ပန်းကန်တစ်ခုကဲ့သို့ကောင်းမွန်သောကြွယ်ဝပြီးရိုးရှင်းသောငါးဟင်း ...
ဆိတ်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ Creamy မှို
မှိုများနှင့်ရှမ်ပင်းဂျုံများသည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်သီးခြားအစာတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းနှင့် တွဲဖက်၍ ပြုလုပ်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအစားအစာဖြစ်သည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းမှိုမှိုများ၌ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သောကြယ်တစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားရာသီအလိုက်ပန်းကန်တစ်ခုယူဆောင်လာသည်။ မင်းကငါတို့စာရွက်ထဲရောက်နေပြီ။
သင်တန်းသား (၄ ယောက်) - ၅၀၀ ဂရမ်။ စျေးကွက်အတွင်းရှိအမျိုးမျိုးသောမှိုများ၊ မှိုများပေါ် မူတည်၍ အရသာရှိလိမ့်မည်။ …
ကြက်သွန်ဖြူ Battery ကိုအတူမှို
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အိမ်၌မည်သည့်နေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာတွင်မဆို your ည့်သည်များအားအံ့အားသင့်စေရန်သင့်လက်၌သင့်ကို AS စစ်မှန်စွာပို့ဆောင်ပေးသည် (ယခုအချိန်မဟုတ်ပါ)
ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဖြူထဲမှမှိုများသည်ယခုမှိုရာသီရောက်ပြီ ဖြစ်၍ ချက်ပြုတ်နည်းများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
ငံပြာရည်ထဲမှာအရသာမှို, တစ်အရသာပန်းကန်။ ငါတို့မှိုရာသီရောက်နေပြီ၊ သင်အဲဒီအချိန်ကအသုံးချပြီးကျန်နှစ်တစ်နှစ်လုံးကိုရှာရန်ခက်ခဲသည်။
Sfenjs သို့မဟုတ်အိမ်လုပ်ပတ်ပတ်လည် churros
အဆိုပါ sfenjs မော်ရိုကို၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကဂန္စပိန် churros ကဲ့သို့ပေမယ့်ပတ်ပတ်လည်အသွင်သဏ္ဌာန်ရှိသည်။ အနီးအနားမှာစတိုးဆိုင်နီးပါးနီးပါးရှိပါတယ် ...
စကော့တလန်မှဆင်းသက်လာသော Sohortbreads သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ၎င်းတို့ကိုအချို့သောခဲဖွယ်စားဖွယ်များ၌ရောင်းရန်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်ထွက်ပေါ်လာသောအခါအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကို ၀ ယ်ရမည်နည်း။
သင်၏နေ့လည်ခင်းကော်ဖီကိုချိုစေမည့်အရသာကိုသင်ရှာနေသလား။ ဤသံပုရာစမုန်ဖြူသောပေါင်မုန့်သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါင်မုန့်သည် ...
အပူထိမှန်သောအခါအသီးဖျော်ရည်ကို ပြင်ဆင်၍ အလွန်အေးသောသောက်စရာနည်းလမ်းမရှိပါကသင်သဘောတူသည်မဟုတ်လော။ အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိတယ်။
မင်္ဂလာပါ #zampabloggers! ကျနော်တို့ဇန်နဝါရီလ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးသဆင်ခြေလျှော, ငါတို့လှိမ့်မယ့်အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံပြန်လည်ထူထောင်အပေါ်တက်ဖို့အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသောအပေါ်ဆက်လက်။ မင်းကိုကတိပေးခဲ့တယ်
ဤသည်မှာသင်၏ခရစ်စမတ် menu တွင်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေသောချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့၊ ရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတယ်၊
Plum နှင့်အတူ Sirloin
ဒီနေ့ငါနှစ်ယောက်အတွက်ညစာစားဖို့စဉ်းစားပြီ ကျနော်တို့ဇီးသီးနှင့်အတူ sirloin ပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်, ငါထင်သောသူတို့အားမြင်ကွင်းများများအတွက်စံပြမီနူးဖြစ်လိမ့်မည် ...
ဒီနေ့ဒိန်ခဲငံပြာရည်ပါ ၀ င်တဲ့ချက်ပြုတ်နည်းလေးတစ်ခု၊ ပါတီပွဲများ၊ မွေးနေ့များ၊ ခရစ်စမတ်စသည့်အထူးအခါသမယများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောစာရွက်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။
မိသားစုကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု၊ ဘီယာဖြင့် ၀ ယ်ထားသောဝက်သား။ အချိန်တိုအတွင်းတွင်ပြင်ဆင်သောရိုးရှင်းသောစာရွက်။ လေယာဉ်ရုံ ...
caramelized ကြက်သွန်နှင့်ငှက်ပျောသီးနှင့်အတူဝက်သား tenderloin
caramelized ကြက်သွန်နှင့်ကြော်ထားသောငှက်ပျောသီးနှစ်မျိုးလုံးသည်ဤရိုးရှင်းသောပန်းကန်ကိုချိုမြိန်စေသည်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းသည်ဝက်သားနူးညံ့ချောမွေ့သည်။ အသားတစ် ...
ဝက်သားတင်ဒါကိုပြင်ဆင်ရတာကြိုက်တယ်။ အသားကနူးညံ့ပြီးအရည်ရွှမ်းတယ်။ ကလေးတွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေစားဖို့ခက်ခဲတယ်။ ပံ့ပိုးရန် ...
ငါ ၀ က်သားတင်ဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမင်းသိပြီးသား။ ၎င်းသည်အလွန်နူးညံ့သောအသားဖြစ်ပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သည်။
မှိုမုန့်နှင့်အတူဝက်သား tenderloin ။ ညစာစားရန်၊ စားသောက်ရန်သို့မဟုတ်အခမ်းအနားပြုလုပ်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောပန်းကန်တစ်ခုမှာရိုးရှင်းသောပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ...
ငံပြာရည်အတွက်ဝက်သား sirloin, ညစာစားရန်ပြင်ဆင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောပန်းကန်၊ ပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောအရသာရှိသော sirloin နှင့်…
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: 1/2 ကီလိုဂရမ်အမဲသား tenderloin ကုန်တယ် parsley ၏ 1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း½သံပုရာထောပတ် 100 ဂထောပတ်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဆားအဘိတ်: အဆီ, ဖယ်ရှား ...
ပွဲတော်များတွင်ပြင်ဆင်ရန်ချက်ပြုတ်နည်းများ၊ ၀ ိုင်အနီရောင်ငံပြာရည်ဖြင့်ချက်ပြုတ်သည်။ ရိုးရှင်းပြီးအလွန်ပြည့်စုံသောစာရွက်နှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာသွားသော ...
မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေချက်ပြုတ်ထားတဲ့အမဲသားအတွက်ဒီအစာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ယူလာပေးတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကြွယ်ဝသောပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောအမြှေးပါးများထက်အသားပိုမရှိပါ၊ အနည်းဆုံးတော့အိမ်၌ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့တွေးသည်။ ဒီနေ့စာရွက်အတွက် ...
ပန်းကန်ပြားပျံသည်ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲများ၊ အထူးနေ့တစ်နေ့သို့မဟုတ်အခမ်းအနားတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်နိုင်သောရိုးရှင်းသောပန်းကန်လုံးနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အလွန်ကောင်းသောကြည့်ရှုရန်တစ်ပန်းကန်, ...
ဒီအတိတ် (နောက်ဆုံး) ခရစ္စမတ်ပွဲကိုအစာမစားရသေးသူတွေအတွက်မင်းကဒီအရသာရှိတဲ့အသားအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းကိုငါဆောင်ခဲ့တယ်။
ရိုးရှင်းသော၊ စျေးသိပ်မကြီးပေမယ့်အရမ်းအရသာရှိတဲ့ဟင်းချိုပါတဲ့ကြက်သားအသားဖြူ au gratin ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တော့မှာပါ။ အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ပန်းကန်တစ်ခု ...
ဟင်းချိုala olla, အဘိုးရဲ့လုပ်ထားတဲ့ဇွန်းစာရွက်
လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးအလွန် Lucid Castilian ဟင်းချိုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၊ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အရသာရှိသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြိုးစားမှု၌အာခေါင်ကိုမသတ်ဘဲမျဉ်းကိုဂရုစိုက်ပြီးလျင်မြန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းသောစာရွက်? စားပွဲ၊ စားပွဲ၊
butternut squash ဟင်းချို၏ Cream
ပါဝင်ပစ္စည်းများ but butternut squash ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၏ 1 cube ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက် 1 sprig 1 ကြက်သွန်၊ နို့ရည် Parsley ဆားနှင့် ...
CREAM အလင်းဖိနပ် SOUP
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - - အစိမ်းရောင်အသားအရေနှင့်လိမ္မော်ရောင် squash ၁/၄ - ကြီးမားသော scallion ၁ - လိုအပ်သောအဆီထုတ်နို့ - ထောပတ်နည်းနည်း - ...
soft Zucchini Cream ဟင်းချို
ဒီဟင်းချိုကအရမ်းကြွယ်ဝပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး၊ ကြွယ်ဝသော၊ ချောမွေ့သောအခြားဟင်းချိုနှင့်မတူဘဲအရသာရှိခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအရသာရှိခြင်းကိုသင်ပိုမိုကြွယ်ဝစေလိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် ...
မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးလကိုစတင်ရန် creamy ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချို
ကျွန်ုပ်တို့သည်လသစ်ကို စတင်၍ ကြွယ်ဝသောမုန့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချိုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာကိုအနည်းငယ်ဂရုစိုက်ကာ၎င်းကိုပြုလုပ်တော့မည်။ မင်းသိပါတယ် ...
အေးနေဖို့ကဒီမှာပါ။ ဤသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ menu ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားစေခဲ့သည်။ အအေးမိဟင်းလျာများဖြင့်အစားထိုးပါပြီ ...
ALUNOND SOUP ဆား
လိုအပ်ချက် - ၁၅၀ ဂရမ်။ လှော်ခတ်သောဗာဒံသီး (ဆားမပါ) ၁ အလယ်အလတ်ကြက်သွန် ၃ ဇွန်းထောပတ် ၁ ၁ ½ရေဆား ၁၀ ကြော်သို့မဟုတ်ပေါင်မုန့်ပေါင်မုန့် ၁၀ ချပ် ...
အဖြူရောင်ပဲဟင်းချို, leek နှင့်ပုစွန်
ပဲပင်ဟင်းချိုများသည်ပူနွေးရန်အတွက်ယခုနှစ်အအေးဆုံးလများအတွင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါဝန်ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း, ဖြစ်ပျက်အဖြစ် ...
ဤကြက်သားဆန်ဟင်းချိုသည်ဆောင်းတွင်းအေးသောရာသီများတွင်မဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။ အိမ်ပြန်နိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့ဘာမှမရှိ ...
ဟင်းချိုနှင့်လိမ်းဆေးတို့သည်ကျွန်ုပ်မီးဖိုချောင်၏ဇတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသူတို့ထဲ၌ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အားသာချက်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ ...
Broccoli နှင့် Vegetable Soup တို့သည်ဤဆောင်းရာသီအတွက်အလွန်နှစ်သိမ့်သောပူပြင်းသည့်ဟင်းချိုဖြစ်သည်။ အလွန်ကျန်းမာသောပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အထူးသဖြင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်မုန်လာဥဖြင့်ပြီးအောင်လုပ်သည်။ ရိုးရှင်းသော၊ ကျန်းမာ။ အာဟာရရှိသောစာရွက် ...
ဟင်းချိုနှင့်လိမ်းဆေးများသည်အိမ်၌ပြင်ဆင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှရပ်တန့်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းနွေရာသီအအေးဗားရှင်းများပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့မူကွဲသို့ပြန်သွားသည့်အခါယခုဆောင်း ဦး ရာသီဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေအလွန်အကျွံပြီးနောက်, ဒီရက်သတ္တပတ်ကိုစတင်ရန်စိတ်ကူးစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ zucchini နှင့်ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်အတူဟင်းချို
အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပတ်တိုင်းဟင်းချိုသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မုန့်များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ငါတို့ထည့်နိုင်သောဟင်းချိုများ ...
ထိုင်း galet ဟင်းချို
Galets Soup သည်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်သည့်ခရစ်စမတ်ပြက္ခဒိန်နှင့်ဘာလာရီရစ်ကျွန်းစုများတွင်ခရစ္စမတ်ပွဲစားများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ The …
Chickpea ဟင်းချိုနှင့် orzo ခေါက်ဆွဲ
နွေရာသီရောက်သည့်အခါဟင်းချို၊ စွပ်ပြုတ်နှင့်အခြားဟင်းလျာများကိုစွန့်လွှတ်သူများရှိသည်။ ဒါငါ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ငါမကြာသေးမီကဒီပြင်ဆင်နေခဲ့သည် ...
နွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောချက်ပြုတ်နည်းများကိုလောင်းကစားဖြစ်သော်လည်းခြွင်းချက်အချို့ရှိသည်။ မြောက်ပိုင်းရှိမီးခိုးရောင်များထဲမှတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဤဟင်းချိုကိုကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အာဟာရ - ၁ ဥ၊ ၁ ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်၊ ဆီ၊ ရှလကာရည်၊ ဆား၊ ရေ ၁ လီတာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: - ကျနော်တို့နှင့်အတူ mayonnaise ပြင်ဆင်နေ ...
ဆောင်းရာသီမှာရေခဲသေတ္တာထဲမှာကြက်သားဒါမှမဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအမြဲတမ်းရှိတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့အရသာရှိတဲ့အိမ်လုပ်ဟင်းချိုကိုအချိန်မရွေးငါပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ y …
ကျွန်ုပ်တို့သည်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Recipes de Cocina တွင်သက်သောင့်သက်သာရှိသောစာရွက်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ကြွယ်ဝသောပေါင်းစပ်ပါဝင်သောဟင်းချိုတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားရဲ့ခရစ်စမတ်ညစာကဘယ်လိုလဲ ငါအရမ်းကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဒီနေ့လွန်ခဲ့တဲ့ပိုလျှံမှုတွေအတွက်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်ယနေ့ယူလာခဲ့ပါပြီ။
ဒီနေ့ခရစ်စမတ်စားပွဲပေါ်ကဂန္တ ၀ င်ငါးနှင့်ပင်လယ်စာဟင်းချိုကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျန်တဲ့တစ်နှစ်တာအတွက်လည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
picadillo ဟင်းချိုသည် Andalusian အစားအစာအထူးသဖြင့် Sevillian အစားအစာဖြစ်သည်။ ဒီဟာကအရမ်းအာဟာရဖြစ်စေတဲ့ဟင်းတစ်မျိုးပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ semolina ၏ 300 ဂရမ်ရေလီတာဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၏2Cube ပြီးလျှင်ဒိန်ခဲ 100 ဂရမ်အဘိတ်အဘိတ်ထဲမှာရေကိုအပူ ...
ယခုနှစ်အခမ်းအနားပြီးဆုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနည်းငယ်သန့်ရှင်းစေရန်အလင်းရောင်နည်းနည်းဖြင့်လောင်းသည်။ တူသောချက်ပြုတ်နည်းများ ...
မြန်မြန်၊ ရိုးရိုး၊ အရသာ ... ဒီခရမ်းချဉ်သီးနှင့်စမုန်နက်ဟင်းချိုသည်သင့်မီနူးများပေါ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပန်းကန်ဖြစ်လာရန်အရာအားလုံးရှိသည်။ မင်းအတွက်ပူလို့သောက်နိုင်တယ် ...
အေးခဲဟင်းချိုနွေရာသီအတွက်အလွန်လန်းဆန်းဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ အဓိကပါဝင်တဲ့ဒီခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချိုပဲ ...
ဟင်းချိုနှင့်မုန့်ညက်သည်ညစာစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလင်း၊ အာဟာရနှင့်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကြောင်းမလုံလောကျသကဲ့သို့, ...
ယခုသင်သည်ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချိုကဲ့သို့သောပူပြင်းသည့်ပန်းကန်တစ်မျိုးဖြစ်လျှင်ပေါ့ပါးပြီးဖြည့်စွက်ထားသောဟင်းလျာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်နိုင်သောဇွန်းဟင်းလျာများ ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်လုပ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချိုတစ်ခွက်၊ အလင်းရောင်နှင့်ကျန်းမာသောပန်းကန်ကိုပြင်ဆင်မည်။ အိမ်လုပ်ဟင်းချိုများသည်နှစ်သိမ့်မှုများစွာဖြစ်စေသည်။
မကြာခဏမီးဖိုချောင်တွင်အခက်ခဲဆုံးအရာမှာညစာစားရန်ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်ကလေးများရှိလျှင်။ သူတို့ကိုကောင်းကောင်းစားစေချင်တယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်တစ်နေ့တာ၏မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသေခြာစေနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာခွက်တစ်ခုပြောင်းပြီး ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ကြက်သားဟင်းချို၊ ဤချမ်းအေးသောနေ့များအတွက်အရသာနွေးထွေးသောဟင်းချို၊ ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့ဂန္ထဝင်အိမ်လုပ်စာရွက် ...
ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်, ခေါက်ဆွဲနှင့်ပဲဟင်းချိုမှာအားလုံးရှိပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်သက်သာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပူပန်းကန်ဖြစ်၏ အအေးဆုံးသောနေ့ရက်များအတွက် ...
မုန်လာဥ, miso နှင့်ဂျင်းဟင်းချို
ဟယ်လိုဝင်းတွင်အဓိကဇာတ်ကောင်မှာရွှေဖရုံသီးဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျးယနေ့ကြှနျုပျတို့သညျဤပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူမည်သည့်ဟင်းကိုပြင်ဆင်မည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှုတ်သွင်းခံ ... ဟုတ်တယ်၊
မင်းရဲ့နိုင်ငံတွေမှာရာသီဥတုဘယ်လိုနေလဲ ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးအေးနေတယ်၊ ​​ဒီလိုအပူချိန်နိမ့်တာကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်ဖူးတယ်။
ဖရဲသီးနှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်ဟင်းချိုတစ် ဦး၊ ဖရဲသီးကအရမ်း ...
အေးခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချို, နွေရာသီအတွက်စံပြ။ ယခုခရမ်းချဉ်သီးရာသီ ဖြစ်၍ ပိုကောင်းလာသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်အတွက်ဤစာရွက်ကိုယူလာပေးသည်။
ဒီနွေ ဦး ရာသီဥတုကြောင့်သင့်အားသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်လန်းဆန်းသောမက်မွန်သီးလေးပါ ၀ င်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၈ မှည့်သောမက်မွန်သီး ၂ သံပုရာအချပ်များ ...
cava နှင့်အတူ Mandarin sorbet
အထူးအချိန်ကာလများတွင်အစားအစာနှင့်အတူလိုက်ပါရန် cava နှင့်အတူ Mandarin sorbet ။ ဒီ sorbet ဟာ ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: Granny Smith ပန်းသီး ၄ ဂရမ် (၅၀၀ ဂရမ်) ရည် ၃၀ ဂရမ်ပါဝင်သောသံပုရာ ၁ ခွက် (သကြား ၃၀၀ ဂရမ်၊ ၃၀ မီလီမီတာနှင့်သကြား ၃၀ ဂရမ်) ။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ငါသောက်စရာများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများထက်ပိုမိုတီထွင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုမသိပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လျော့နည်းပျောက်ဆုံးသောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ...
ငါးများကိုအစာအမျိုးမျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်က ၀ ံပုလွေကဲ့သို့ခံစားရသည်ကိုကြည့်ကြစို့။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ၁ silverside ၄ ဥ ၃ ဥ၊ ၃ tbsp ...
Souffléသည်ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ဖြစ်ပြီးအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ရောနှော။ ရိုက်ထားသောကြက်ဥအဖြူများကို အခြေခံ၍ ပြင်ဆင်သည်။ ဟင်းပွဲကိုပန်းကန်တစ်ခုအနေနဲ့အစေခံနိုင်တယ်။
Spaghetti အယ်လ် cartoccio
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: 350 ဂရမ်။ spaghetti4ဇွန်းရေနံ 16 ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး 16 ချောသောသံလွင်သီးသံလွင်ကုန်တယ် parsley Oregano အဘိတ်: မှာခေါက်ဆွဲကိုကောင်းစွာပြုတ် ...
BlackBerry ယို strudels အလွန်လွယ်ကူ!
ယနေ့ငါတို့အဆိုပြုထားသောအချိုပွဲသည်ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်felစတြီးယားနှင့်ဂျာမန်အစားအစာတို့၏ရိုးရာအချိုပွဲဖြစ်သော Apfelstrudel ၏အမြန်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပြီး ...
မုန်ညင်းနှင့်အတူကြက်သားအထွchicken်အမြတ်တည်းဟူသောဤ appetizing စာရွက်, သူတို့နေသောကြောင့်, တနင်္ဂနွေမှာပျော်မွေ့ရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option တစ်ခုဖြစ်သည် ...
ဒီနေ့ surimi tapas ကိုအရသာရှိတဲ့အရသာနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာဒီနေ့ငါမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ: - ပေါင်မုန့် 1 - ကြက်ဥ 1 - Mayonnaise ...
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအရသာရှိသောချိုမြိန်ပြီးလုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်ရေစာနှင့်မနက်စာအတွက်ဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာသင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။